Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ) ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များ
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ) ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များ
at 6/03/2016 08:59:00 AM
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ) ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များ အဆင့်ဆင့်ပုံတွေပါ။
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ဗမာလူမျိုးများရဲ့ ပထမ ဆုံးသော နုိုင်ငံရေး ပါတီ တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှု သမုိုင်းကြောင်း လေ့လာရင် ကွန်မြူနစ် ပါတီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကုို မေ့ထားလုို့ မရပါ။
သုို့သော်... ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကုို အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ဆုိုတဲ့ အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်အဖွဲ့ များ လုပ်ကြံခဲ့အပြီးမှာတော့ ကွန်မြူနစ် ပါတီ ဆုိုတာ အမျိုးသားရေး သစ္စာ ဖေါက်လုို ဖြစ်လာတာ ဒီနေ့ ထိပါ။
ဗုိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဟာ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် မုို့လုို့ ဘာသာရေး နဲ့ မဆက်နွယ်တဲ့ နုိုင်ငံကုို ထူထောင်ချင်တယ်။
အမျိုးဘာသာ သာသနာ ဆုိုတဲ့ အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကုို နုိုင်ငံတော် ဘာသာ အနေနဲ့ Theocracy နုိုင်ငံ လုပ်ချင်တယ်။
ဒီလုို ပေါ်လစီ ဆွဲလုိုက်ရင် ကချင်၊ ကရင် နဲ့ ချင်းတွေက အစောကတည်းက လက်တွဲတော့မှာ မဟုတ်၊ ဒါဆုို ဗုိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက နုိုင်ငံရေးသမား ပီပီ သဘောပေါက်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် တတ်နုိုင်သလောက် အချိုတပ် အကြိုက်ဆောင်ခဲ့တယ်။ နုိုင်ငံတော်ဘာသာ ကိစ္စ လုံးဝ စကား မဟ ခဲ့ပါ။
မီဒီယာ ခေတ် မဟုတ်သေးတော့ ဗမာပြည်မှာ ဘာပြဿနာ ဖြစ်နေတယ် ဆုိုတာ ကချင်တွေ မသိခဲ့ဘူး။ ဗမာပြည်ရဲ့သတင်းစာတွေလဲ မရောက်ဘူးကုိုး။ သီးခြား အုပ်ချုပ်ရေး နယ်တွေ ဆုိုတော့ အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန် သတင်းစာတွေ ကချင်ပြည်၊ ရှမ်းပြည်၊ ချင်းပြည်တွေမှာ မခေတ်စားဘူး။
ပင်လုံစာချုပ်ဟာ ဥရောပ နုိုင်ငံတွေလုို သီးခြား လူမျိုးခြား နုိုင်ငံငယ်လေးတွေ အတူပေါင်းစည်းဖို့ ချုပ်ဆုိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်ပါ။
ဗမာစစ်တပ် အခု တုိုက်ခုိုက်သိမ်းပုိုက်နေတဲ့ နေရာတွေဟာ ဗမာဘုရင်လက်ထက်မှ အစ၊ အခုထိ ဗမာတွေ ခြေဦးချခဲ့တဲ့ နေရာတွေ မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် ရောက်တဲ့ နေရာတုိုင်းမှာ ရွှေဒဂုံစေတီ ပုံတူ တည်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ အင်ပါရာအသစ် ကုို ထူထောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၇ ရာစု တုန်းက ကိုလုိုနီခေတ် အစပျိုးခဲ့စဉ်က လုပ်ခဲ့သော သဘောသဘာဝ အတုိုင်း အခု ဗမာစစ်တပ် လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
University tudent gunned down byasoldier from Bu...
I AM GUM SENG AWNG MMA USA
Gum seng awng hte seng ai statement Mungdan ngang ...
KNO call government of pakistan to stop selling JF...
Awng Wa,aparty Leader is trying to save Myit Son...
Demonstration against Myit Sone Dam Construction b...
Maroi nni hpa